Freelance jobs and Myanmar (မိတ်ဆက်) | Myanmar Tech Press
2018-03-13 2018-04-06 Admin ၀န်ဆောင်မှု, Ecommerce, economic, Internet, Web Services, websites, ကုမ္ပဏီ, နည်းပညာ, အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှု
Image Source: https://www.topcompanies.news/list/ppc-companies
Freelance job ဆိုတာဘာလဲ – freelance job ဆိုတာကိုယ်ကျွမ်းကျင်ရာဘာသာရပ်တစ်ခုခုကို online ေပါ်က လုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့ လွပ်လပ်တဲ့အလွတ်တန်း အလုပ်မျိုးပါ။လွပ်လပ်တဲ့အလုပ်လို့ဆိုလိုတာက အလုပ်လုပ်သူတွေဟာ စာချုပ်စာတမ်း ရေရှည်ကိစ္စများအတွက် လုပ်ကိုင်နေစရာမလိုပဲ မိမိ အားလပ်အဆင်‌ြေပချိန်တွေမှာ လွပ်လပ်စွာလုပ်ကိုင်နိုင်လို့ပါ။
Freelance job platform ဘယ်လို အလုပ်လုပ်တာလဲ?
အင်မတန်ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံမျိုးနဲ့ အလုပ်လုပ်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ freelance website တစ်ခုခုမှာ registerလုပ်မယ် ြပီးတော့ profile ြပည့်စုံစွာြဖည့်စွက်ြပီးရင် အလုပ်စတင်လျှောက်လို့ရပါြပီ။ အလုပ်အပ်သူတွေဟာ သူတို့အလုပ်အတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ အရည်အချင်းနဲ့ကိုက်ညီခဲ့ရင် သင့်ကို အလုပ်ခေါ်ပါမယ်၊ သင်ကသူတို့အတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ project ြပီးဆုံးအောင်လုပ်ပေးြပီးရင် သတ်မှတ် ငွေပေးစနစ်နဲ့ရောက်လာမယ့်သင့်ငွေကို ထုတ်ယူရုံပါပဲ။
နယ်ပယ်အသီးသီးက ကျွမ်းကျင်သူ ဘယ်သူမဆို အလုပ်လျှောက်လို့ရပါတယ်။
ကျောင်းသားများ၊ေရရှည်အလုပ်အကိုင်မရသေးခင် အလုပ်တစ်ခုခုလိုအပ်နေသူများ၊ရေရှည်အလုပ်အကိုင်များရှိသော်လည်း ြပင်ပ၀င်ငွေလိုအပ်နေသူများ အတွက်အဆင်‌ြေပပါတယ်။ြမန်မာနိုင်ငံရဲ့ အိမ်ရှင်မတွေအတွက်လည်း အထူးအဆင်‌ြေပပါတယ်။
Freelance job ေတွရဲ့ကောင်းကွက်တွေက
နံပါတ် ၁ အချက်က အိမ်မှာတင်အလုပ်လုပ်လို့ရပါတယ်
နံပါတ် ၂ အချက်က ကိုယ့်စိတ်ြကိုက်အချိန်ကို စီမံနိုင်ပါတယ်။
နံပါတ် ၃ ကျွမ်းကျင်ရာနယ်ပယ် တစ်ခု ရှိရုံနဲ့ အလုပ်လုပ်လို့ရပါြပီ။
အကျိုးကျေးဇူးတွေကော ဘာတွေ ြဖစ်မလဲ
ကိုယ်စိတ်၀င်စားြပီး ကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုရှိတာနဲ့ ၀င်ငွေအသင့်အတင့်ရစေနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်က ဒီအလုပ်မှာ ပိုလူသိများလာတာနဲ့ အမျှ pay rate လည်းသိသိသာသာတိုးလာမှာပါ။
Survey ေကာက်ယူထားချက်အရ အလွတ်တန်းလုပ်ကိုင်သူ တွေထဲမှာ ရာခိုင်နှုန်းအများဆုံးက Writer ေတွ ြဖစ်ြပီး ကျန်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းတွေက Web development ,Designer,Translating,Marketing စသ ြဖင့် အသီးသီးရှိ ြကပါတယ်တဲ့။တစ်ြခားသော အလွတ်တန်းနယ်ပယ်တွေလည်း‌ြေမာက်များစွာရှိပါသေးတယ်။
အမျိုးသမီးနဲ့ အမျိုးသားတွေ အလွတ်တန်းလုပ်ကိုင်ရတဲ့ အ‌ြေကာင်းအချက်တွေမတူညြီကပါဘူး။
အမျိုးသားတွေက သူတို့စိတ်ပါ၀င်စားရာ ၀ါသနာတွေအရ လုပ်ကိုင်ြကတာြဖစ်ြပီးတော့
အမျိုးသမီးတွေကတော့ လွတ်လွပ်လပ်လပ် လုပ်ကိုင်ချင်လို့ လုပ်ကိုင်ြကတာြဖစ်ပါတယ်တဲ့။
ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေကတော့ ကျောင်းသားဘ၀ကို ၀င်ငွေအနည်းငယ်နဲ့အထောက်အကူ ြပုချင်လို့ လုပ်ြကပါတယ်။
ြမန်မာနိုင်ငံမှာကော အဆင်‌ြေပပါ့မလား ?
ြမန်မာနိုင်ငံမှာလည်း Freelance website များရှိလို့ အဆင်‌ြေပပါတယ်။
Image Source: https://mmfreelancehub.com
Image Source: www.chatesat.com
Facebook မှာလည်း freelance နဲ့ပတ်သက်တဲ့ page ေတွ group ကိုလွယ်ကူစွာရှာဖွေနိုင်ြပီး အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများသတင်းများကိုလည်း အချိန်နှင့်တ‌ြေပးညီ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
တိုးတက်လာတဲ့နည်းပညာရေစီး‌ြေကာင်းနဲ့အညီ Freelance job ေတွဟာြမန်မာနိုင်ငံမှာလူသိများလာြပီး သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ် အသီးသီးအတွက် အလုပ်ခေါ်စာတွေကိုလည်း အများအ ြပားတွေ့လာရတဲ့အတွက်
နောက်ထပ် freelance အလုပ်အကိုင် အသေးစိတ်အချက်အလက်များနဲ့ website အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလည်း အလျင်းသင့်သလိုရေးသွားပေးသွားမှာြဖစ်လို့
မိတ်ဆက်ကိုတော့ ဒီနေရာမှာပဲ နိဂုဏ်း ချုပ်ပါရစေဗျ။
← အသုံးတွင်ကျယ်လာနေသော GPS (Global Positioning System) စနစ်သုံး Map
ငွေလွှဲခြင်း ငွေပေးချေ ခြင်း နဲ့သက်ဆိုင်သော ၀န်ဆောင်မှုများအတွက် Ooredoo Myanmar ရဲ့ “ M-Pitesan” Mobile Application →
GrabFood ဝန်ဆောင်မှု တစ်နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အနေဖြင့် စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းများကို အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည်ဟု ကတိကဝတ်ကိုထုတ်ပြန်